बुटवलकाे कोठीमा भेटिए रुसी र चिनियाँ कलगर्लहरू - Khabar Time
‘कतै काठमाडौंको ठमेलतिर झैँ बारमा ल्यायो कि क्या हो !’ भन्ने लाग्दालाग्दै भित्र छिरियो । हो रहेछ त ! ठमेलतिरकोझैँ भव्य बियर बार देखियो । भित्र क्याबिनहरु थिए ।
हामीसँगै गएकाहरु बारका परिचित ग्राहक रहेछन् । जानासाथ काउन्टरमा बसेका कर्मचारीसँग हाई, हेल्लो गर्दै हात मिलाउन थाले । हामी दुई जना भने नौला थियौं त्यहाँ । उनीहरु जता जान्थे, त्यतै पछि लाग्थ्यौं । भित्र क्याबिनै क्याबिन देखियो । ओपन स्पेसमा त्यत्ति ग्राहक थिएनन् । हामी ६ जना त्यस्तै एउटा कोठामा छिर्यौं ।
ती युवतीलाई उनको साथीले सम्झाउन प्रयोग गरेको भाषा नेपाली थिएन, अंग्रेजी पनि हैन । जापानी, चिनियाँ वा कोरियालीझैँ केही थियो, जुन मैले पहिले कहिल्यै सुनेको थिइनँ । ‘यिनीहरु त नेपाली हैनन् कि क्या हो ?’ यो घरसम्म ल्याउने साथीलाई मैले सोधेँ ।
साथीले जवाफ दियो, ‘अघि विवेकले भनेको चाइनिज कन्टिनेन्टल यिनीहरु नै हुन्, यार मोज गर्नुस् ।’ नेपालमा चिनियाँ र अफ्रिकी युवतीहरु यौनकर्मीको रुपमा सक्रिय रहेको सुनेको थिएँ । काठमाडौंका नाइट क्लब, लाउन्ज र बारमा भेटिने पनि गर्थे तर बुटवलमा पनि उनीहरु आइपुगेको देखेर म छक्क परेँ ।
बोल्दै नबोल्ने लाटीसँग त के बस्नु ! साथीसँग बसेकि अलिअलि नेपाली र अंग्रेजी बुझ्ने कोहि छ भने यता पठाइदेऊ भनेँ । साथीले उसैको काखमा बसिरहेकी युवतीलाई मतिर पठाइदियो । मेरो छेउमा बसेकि अर्की युवती ऊतिर गइन् ।
नाम सोधेँ तर खास नाम उनले भनिनन् । नेपाली नाम राखिसकेको रहेछ उनको, प्रीति । मसँग बस्दा पनि उसको हात भने चलिरहेको थियो । म भने काम भन्दा गफ गर्ने मुडमा थिएँ । उसलाई बियरमा कम्पिटिसन दिन थाले । उसले मस्त खाइन् । म पनि झ्यापझ्याप भएँ, उनी पनि झ्याप भइन् ।
कुरा गर्दागर्दै उनीहरु बुटवलमै बस्न नआएको खुल्यो । झन् छक्क परेँ । उनीहरु यहाँ केही समय मात्रै बस्ने रहेछन्, उनीहरुको लक्ष्य भने स्थलमार्ग हुँदै भारतको मुम्बई पुग्ने रहेछ । उनले भनिन्, ‘भोलि सात जना तिब्बती साथी र तीन जना रुसी साथी मुम्बई जाँदैछन् । म अलि पछि जान्छु ।’
गफगाफ राम्रै जम्दै थियो, चिनियाँ कन्टिनेन्टल खान गएका साथीहरु फर्किए । म पनि नेपाली बियर र चिकेन चिल्लीले झ्याप भइसकेको थिएँ । बाइक चलाउनसक्ने अवस्था थिएन । साथीसँगै नजिकैको गेस्ट हाउसमा गएर सुतेँ ।
शुक्रवारले रिपाेर्टिगंका क्रममा काठमाडाैंमा भेटेकाे रसियन मुलका २ युवती जाे फ्ल्याट लिएर देहव्यापारमा सक्रिय थिए
नागरिक न्यूजकाे शुक्रबारे खोजबाट साभार गरिएकाेमा क्षमाप्रार्थी छाैं ।
मौसम अनुसारको तस्बिरले भरिन्छ शुष्माको फेसबुके भित्तो!
पोखरामा बन्दैछ 'इन्जोय जोन' खुला हुँदै गाँजा र सेक्स!